सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा लफडा: कार्यालयमा कागजात नआउँदा सेवाग्राहीले पाएनन् सेवा ! – The Public Today
सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा लफडा: कार्यालयमा कागजात नआउँदा सेवाग्राहीले पाएनन् सेवा !
द पब्लिक टुडे डेस्क मंसीर २१, २०७७ १०:०८ am
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेउमै चिटिक्क परेको दुई तल्ले भवन । २० वटा कोठा रहेको भवनमा भाडामा छ एक सरकारी कार्यालय । प्रत्येक दिन अन्य कार्यालयझैं समयमै खुल्छ ती कार्यालय । समयमै कार्यालयमा हाजिर हुन्छन् कार्यालयका कर्मचारी । तर ती कार्यालयका कर्मचारीहरुको काम अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरु भन्दा फरक छ ।
१० बजे कार्यालयमा उपस्थित भएका कर्मचारीहरु हाजिरी रजिष्टरमा सहिछाप गरेरै दिन बिताउँछन् । सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थापनाकाल देखिनै सुनसान छ धनुषाको ढल्केवरका नापी कार्यालय । नापी कार्यालय जनकपुरले आवश्यक कागजात तथा सामाग्रीहरु बरबुझार्थ नगर्दा नापी कार्यालय ढल्केवरका १५ जना कर्मचारी विगत चारबर्षदेखि कामविहिन छ ।
२०७२ असोज १४ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले धनुषाको ढल्केवरमा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार २०७३ माघमा ढल्केवरमा नापी कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर स्थापना भएको ४ बर्ष वितिसक्दा पनि कार्यालयको कामकाज सुरु हुनसकेको छैन ।
नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नापी कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको बार्षिक लाखौं रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेकोमा आफू पनि चिन्तित रहेको नापी कार्यालय ढल्केवरका प्रमुख नापी अधिकृत राजेन्द्र साह बताउँछन् । कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा १५ जना कर्मचारी हाजिरी गरेर दिन विताउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ ।
यहाँको सेवा क्षेत्र तोकिएका ठाउँको अभिलेख तथा आवश्यक कागजातहरु बरबुझार्थ गर्न नापी कार्यालय जनकपुरलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको कार्यालय प्रमुख साहको भनाई छ । ‘कागजातको लागि जनकपुर कार्यालयलाई हामीले पटक–पटक ताकेता ग¥यौं’ नापी अधिकृत साहले भने, ‘तर त्यसको कुनै जवाफ आएन।’ कुनै सुनवाई भएन । सुन्ने वाला कोही भएनन् । ‘अभिलेख तथा आवश्यक कागजात दिन नापी कार्यालय जनकपुरले आनाकानी गरिरहेको छ’, उनले थपे । सरकारले यस कार्यालयको घरभाडा र कर्मचारीको तलबमा लाखौं रकम खर्चे पनि यहाँका जनताले सेवा नपाएकोमा नापी अधिकृत साहले दुख व्यक्त गरे ।
साविकको २१ वटा गाविस अर्थात हाल ५ वटा पालिका क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको उक्त कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै कामविहिन छ । हालको मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा त्यस क्षेत्रका सेवाग्राहीहरु सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
कार्यालयमा नापी अधिकृतको नेतृत्वमा सर्भेक्षक ५ जना, अमिन १ जना, सह–लेखापाल १ जना, कम्प्यूटर अपरेटर १ जना, कार्यालय सहयोगी ५ जना, स्वीपर १ जना गरी १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीको तलबमा प्रतिमहिना ३ लाख २५ हजार ४ सय रुपैया जाने गरेको कर्मचारी श्रोतले बताए । यसरी बर्षमा कर्मचारीको तलबमा मात्रै ३९ लाख ४ हजार ८ सय.रुपैया खर्च भइरहेको देखिन्छ । कार्यालयका लागि प्रतिमहिना ३८ हजार ५ सयका दरले घर भाडामा लिइएको छ । बर्षमा कार्यालयको घरभाडामै ४ लाख ६२ हजार रुपैया खर्च भइरहेको छ ।
तर नापी कार्यालय जनकपुरको लापरवाहीले सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग भएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष रामकुमार महतो बताउँछन् । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारकै कर्मचारीले बखेडा गर्नुको कुनै तुक नभएको उनको बुझाई छ ।
सरकारले गरेको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा नल्याए अब आफूहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने मिथिला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तेजनारायण साह(संतोष)ले बताए । ‘नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा दिन स्थापना भएको कार्यालय सञ्चालनमा कुनै किसिमको बहानाबाजी चल्दैन, यथास्थितीमै सञ्चालमा ल्याउनपर्छ’, उनले भने ।
मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतोले नापी कार्यालयको कागजातको लागि कयौं पटक पहल गरेपनि मालपोतकै बहानामा नापीको अभिलेख तथा कागजात उपलब्ध गराउन जनकपुर कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको बताए । ढल्केवर कार्यालयलाई अभिलेख उपलब्ध गराईदिन आफूले विभागका ‘डिजी’देखि सम्बन्धित मन्त्रायलका मन्त्रीसम्मलाई आग्रह गरेको उनको भनाई छ । मालपोत स्थापना नभए नापी कार्यालय फिर्ता जान्छ भन्ने द पब्लिक टुडेको जिज्ञासामा मेयर महतोले भने, ‘स्थापना गर्ने निर्णय संघिय सरकारको हो, सरकारले निर्णय गरे मात्रै कार्यालय फिर्ता जान्छ।’ नापी र मालपोत दुवैको लागि अझै पहलप्रयास भइरहेको उनले जनाए ।
यता नापी कार्यालय जनकपुरका प्रमुख सुमन मिश्राले ढल्केवरमा मालपोत स्थापना नभएकै कारण नापी कार्यालको कामकाज सुरु हुन नसकेको बताए । मालपोत वीना नापी कार्यालय सञ्चालनमा आए सेवाग्राहीको लागि झन्झटिलो हुने उनको जिकिर छ । ‘नापी कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा आएर सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा पाउँदैनन्, झन् समस्या बढ्छ’ प्रमुख मिश्राले भने, ‘समस्या झेल्न नागरिक तयार भए मेरो कुनै आपत्ती छैन।’ ढल्केवर कार्यालयलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको स्थानीय तहहरुको समन्वयमा अभिलेख तथा कागजातहरु लान सकिने उनले बताए । ढल्केवर कार्यालयको कागजातहरु तयारी अवस्थामा राख्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको पनि प्रमुख मिश्राले स्पष्ट पारेको समाचार आजको द पब्लिक टुडे दैनिकमा छ ।